SIYAABAHA LAGU BEERAY BARADHADA - BEER CAGAARAN
Tiknooloojiyada baradho badan oo baradho badan oo siyaabo kala duwan
Riyada ah ee degganaha xagaaga iyo beerta waa inay koraan dalag badan oo baradho ah. Taasi waa sababta shaqada ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay waa beerashada sare ee baradho. Sidee loo sameeyaa tan? Waa kuwee noocyo baradho ah oo aad u fiican? Sida loo abuuro baradhada siyaabo kala duwan? Jawaabaha ku jira maqaalkan.
Siraha iyo qawaaniinta barandhada sare ee sii kordhaya
Doorashada saxda ah ee noocyo baradho leh digriiga tayo sare leh. Isticmaalka marxaladda beeraha yaryar waxay horseedi kartaa xaqiiqda ah inaysan jirin wax goosan ah.
Fahmidda iyo koontaroolidda soobixinta digriiga baradho cusub.
Xulashada milmaanta. Bacriminta ugu caansan ee baradho waa digada, ash alwaax, superfosphate potassium, humus.
Isku-dhafka dhulka ee baradhada sii kordhaya ayaa loo isticmaali karaa in ka badan shan sano oo isku xigta. Si loo ciribtiro ciidda ee cudurada, guga waa in la beeray galley qaboobaha on goobta.
Si aad u ururiso dalagga double-baradho ah, isticmaal noocyo hore.
Tiknooloojiyada sii kordhaya baradho badan
Diyaarinta ciidda ayaa si fiican loo qabtaa xilliga dayrta, isla markiiba ka dib goosashada dalagga hore. Tani waxaa loo sameeyaa sida soo socota: adoo adeegsanaya xargaha ama dhejinta ka dhigo calaamadeynta goobta. Si arrintan loo sameeyo, 40 cm waxaa laga tagaa geeska goobta, ka dibna qashin ayaa la qoday intaa dheer (xajmiga ballaca 25-30 cm, qoto dheer - 40-45 cm).
Ka dib 50-60 cm samee god kale, sidaas darteed waxaa loo sameeyaa dhamaadka goobta. Dhulkii qoday ee u dhexeeya boholaha ayaa la dhigaa tuulo. Goobta xayawaanka waa inay noqotaa mid laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfureed. Xilliga deyrta, waxaad ku dari kartaa hadhaaga dhirta, haramaha, qashinka jikada. Dhammaan tani waxay dhacdaa dabayaaqadii hurudda ee jiifka caleemo dhacday. Tamper iyo conlessse mass warshad ma karaan.
Talooyin loogu talagalay sii kordhaya geedo eggplant.
Noocyada qajaarka lagu beeray halkan.
Beerto iyo daryeel caafimaad oo loogu talagalay zucchini //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte/vyrashhivanie-rannih-kabachkov-semenami-ili-rassadoj.html.
Hal bil iyo badh ka hor beerashada baradho, digriiga waa in la googooyaa oo la tuuraa sheyga. Baradho la beeray oo dhulka ku yaal guga hore. Ash, superphosphate iyo digada ayaa lagu shubaa daboolka diyaarsan.
Waxaad isticmaali kartaa oo kaliya digada iyo hal bacriminta aad dooratay. Markaas, at qoto dheer oo ah 7-8 cm, digriiga baradho ayaa lagu beeray oo daboolay dhulka. Sida ugu dhakhsaha badan ee caws u baradho gaadhay 10-15 cm dhererka, waxaa lagama maarmaan ah in ay u jilciso, taas oo ah, si ay u buuxiyaan ciidda.
Nidaamka haadku waa dhowr jeer. Waxay ku xiran tahay heerka koritaanka ee afkoda. Wakhtigan oo dhan, baradho waa in la waraabiyaa. Iyadoo ku xiran cimilada iyo xaaladaha cimilada, waraabinta waxay noqon kartaa mid aad u badan ama, liddi ku ah, dhif. Maqnaanshaha haramku wuxuu saameeyaa soosaarka wax-soosaarka sare, markaa waa inaad si joogto ah ula dagaalameysaa. Waa inaad sidoo kale bacrimisaa baradho.
Bil ka hor goosashada, waraabinta iyo hannaanka bacriminta ayaa la joojinayaa, iyo haadinta iyo abuurku waxay sii wadaan si isku mid ah. Miro baradhada waxaa la fuliyaa xilliga dayrta hore.
Siyaabaha lagu beerayo baradho waa heer caadi ah (digriiga lagu beeray dhul furan) iyo aan lahayn (beeritaanka foosto, lagu beerayo filim madow, beerashada boorsada, beeritaanka caws, iwm. U diyaari mid ka mid ah hababka aan caadiga ahayn.
Baro sida loo koro yaanyada lagu koriyo.
Bandhigyada Talooyin sida loo koro qajaarka lagu koriyo halkan //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-teplitsah/osobennosti-protsessa-vyrashhivaniya-ogurtsov-v-teplitse.html.
Baradho ku beeray caws
Habkani waa in ka badan boqol sano. Aad bay u egtahay waxayna ku haboon tahay dadka aadka u mashquulsan oo ay waqti yar u hartay beerta. Waxaa sidoo kale wanaagsan in la isticmaalo gobollada leh jawi kulul, xilliga xagaaga. Kabriidku waxay u adeegtaa sida ilaaliyaha heer-kulka hawada, sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta qoyaan lagama maarmaanka u ah geedka.
Sidee loo beeraa baradhada hoosteeda? Diyaarso beertiisa isku dhafan, kaas oo soo saaro digriiga baradho. Isla mar ahaantaana waa in yar la riixo dhulka. Ka dibna digriiga waxaa lagu daboolay lakabka caws, dhumucdiisuna waa inay ahaato 10-20 cm Si looga fogaado cawska mustaqbalka, waxaad kordhin kartaa lakabka cawska ilaa 25 cm oo dabooli kara filim cad.
Ka dib markii caleemaha u soo baxaan filimka, jarida ayaa lagu sameeyey. Sidoo kale ma dabooli karto filimka.
Xaaladdan oo kale, dayrta, marka dogob baradho ah ay bilaabaan inay qalalaan, lakabka cawska waa in laga saaraa oo dalagga baradho waa in si toos ah looga soo goostaa dhulka.
Marka la eego bayaannada dadka kuwaas oo horay u isticmaalay habkan barandhada sii kordhaya, dhaliddu waxay ka weyn tahay beeritaanka dhaqameed.